कोरोना कहरमा चलचित्र रिलिज गर्न किन तयार भए शिव श्रेष्ठ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कोरोना कहरमा चलचित्र रिलिज गर्न किन तयार भए शिव श्रेष्ठ ?
पुष १० गतेबाट देशभरका सिनेमा हल खुलेका छन् । तर, सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदा पनि हलमा दर्शकको खडेरी छ । हल सञ्चालकहरु एकजना दर्शकलाई पनि चलचित्र देखाउन बाध्य छन् । नयाँ चलचित्र प्रदर्शन नभएसम्म सिनेमा हलमा दर्शकको चहलपहल बढ्ने देखिन्न । तर, निर्माताहरु तत्काल नयाँ चलचित्र प्रदर्शन गर्न तयार छैनन् ।
ठूला भनिएका चलचित्रका निर्माताहरुले यो समयमा फिल्म प्रदर्शन गर्ने आँट नगर्दा एक्सन स्टार शिव श्रेष्ठले भने आफू निर्मित तथा अभिनीत चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ माघ १ गतेबाट प्रदर्शन गर्दैछन् । कोरोनाका कारण धरासायी बनेको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन लाखौंको लगानीमा बनेको चलचित्र प्रदर्शन गर्ने उनको हिम्मतलाई चलचित्रकर्मीहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
कोभिडको समयमा चलचित्र क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भावनाले चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागेको अभिनेता श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘यो समयमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । म कलाकार भएका कारण चलचित्र क्षेत्रप्रति आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर दर्शकलाई इन्टरटेन्मेन्टको भ्याक्सिनको रुपमा चलचित्र लिएर आउँदैछौं । दर्शकको साथ पाउनेछौं भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं,’ उनले भने ।
४० वर्षदेखि दर्शकले गरेको विश्वासका कारण आफूले चलचित्र रिलिज गर्न लागेको उनी बताउँछन् । ‘कतिले चलचित्र बन्दैन पनि भनेका थिए । तर, दर्शकको विश्वासका कारण आज चलचित्र तयार भएको छ,’ उनले थपे- ‘चलचित्र कमजोर भएर यो समयमा प्रदर्शन गर्न लागेको होला भनेर पनि धेरैले सोच्लान् । तर, त्यसो होइन । कोरोनाले थलिएको चलचित्र क्षेत्रलाई उठाउन हाम्रो यो प्रयास हो ।’
माल्दिभ्समा प्रियंकाको जन्मदिन, रक्सी कम्पनी प्रायोजक !
अभिनेत्री प्रियंका कार्की शनिवारबाट ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेकी छन् । २०४४ साल फागुन १५ गते
कमब्याकको तयारीमा सञ्चिता
दुई सन्तानलाई हुर्काउन केही वर्ष अभिनयबाट टाढा रहेकी अभिनेत्री सञ्चिता लुईटेल अब कमब्याकको तयारीमा छिन्
माफी मागेपछि पल र अरुणबीचको विवाद सुल्झियो
अन्ततः अभिनेता पल शाह र चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष अरुण प्रधानबीचको विवाद
अरुण प्रधानविरुद्ध पल शाहका म्यानेजरको उजुरी
नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता पल शाह विवादमा तानिएका छन् । चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का
‘द ब्याण्ड च्याम्पियन’ घोषणा, विजेताले पाउनेछन् ३० लाख
नेपालमा पहिलो पटक सांगीतिक ब्याण्डहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक रियालिटी शो ‘द ब्याण्ड च्याम्पियन’ हुने भएको छ ।